Kuwa Ugu Wanaagsan Soo Saaraha Iyo Warshad | Medo
MEDO Taxane Kale
Waali ku saabsan fowdada alaabooyinka yaryar ee kala duwan ee guriga yaal?
Khaanad laabta ah, miis, saxar, buug iskiis, gole wasiiro, miis dhinaceeda, kabadh dhinac ah: dhammaantood waa xalka wanaagsan, si loo siiyo keyd dheeraad ah goobtaada.
Alaabta guryaha MEDO waxay ku darayaan qaab gaar ah gurigaaga waxayna helayaan boos badan oo aad ku keydiso alaabtaada. Waa shey lama huraan u ah alaabta guriga haddii aad rabto inaad u siiso macaamiishaada xirmo alaab guri oo dhameystiran. Marka laga reebo howlaha keydinta, waxaan sidoo kale bixinnaa kaas oo lagu dhex daray qeybta loo adeegsan karo.
Golaha Wasiirada / Khamriga
Kabadhka khamriga ee MEDO waa naqshad aad u fiican. Waa mid indhaha soo jiidanaysa waana isku darka qaabka Shiinaha iyo reer Galbeedka. Waxay qaadataa midabka saqda dhexe, taas oo ah mid ka mid ah noocyada cusub ee midabada moodada cusub ee ka dhex muuqda noocyada sare. Intaa waxaa sii dheer, waxay si fiican ugu habboon tahay naqshadaha gudaha badankood. Waxayna soo xulaysaa qurxinta gacan-qabashada fudud ee fudud iyo lugta birta birta ah ee heerka sare, taas oo ka dhigaysa golaha wasiirrada oo dhan kuwo qurux badan oo sharaf leh.
Shaxda Qaxwaha Wareega Yar ee Leather Saddle
Miiska miisaanka wareega ee maqaarka wareega waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu iibiyo miisaska qaxwaha wareega yar leh oo leh aragti u gaar ah. Waxay uga muuqataa suuqa qaabeynta qaabdhismeedkeeda iyo isku dhafka agabyada kala duwan iyo midabada. Waxay keenaysaa saameyn midaynaysa booskaaga.
Saxarada wareega ah
Waa maxay saxarada wareegaya ee qurxoon! Hadduu sheygu si fiican u iibinayo iyo haddii kaleba, waxay ku xiran tahay naqshadeynta iyo saamiga sheyga laftiisa. Bannaanka-cagaarka iftiinku wuxuu siiyaa dareen ah guga iyo cusub. Mar kasta oo saaxiibbadaadu soo booqdaan, indhahoodu waxay qabsan doonaan midabada yar ee midabada leh isla markiiba. Ku fadhiisiga iyada oo cagaha ay dhulka ku hayaan, qayb kasta oo jirka ka mid ah waa ay deggan tahay.
Marmar Wareeg ah Habeenkii Sare
Marmarka Wareegga Habeenkii Sare waa qaab fudud laakiin xarrago leh. Waxay leedahay saldhig madow oo laba jibbaaran, dushana lagu dhajiyay dhagax lagu shiiday. Dhagax adag oo leh qaab marmar cad, kaas oo gebi ahaanba ka soo horjeedda saldhigga midabka madow. Dhagaxa la shiiday ayaa sidoo kale fudud in la ilaaliyo isticmaalka maalin kasta. Lugta qoryaha adag waxay u dhigmi kartaa sagxadda alwaaxda si fiican.
Ahama Leather Steel Saddle Leather Buugga
Maqaarka koorsada caymiska, birta birta ah ee birta dahaadhan ee birta ah waa naqshaddii ugu dambaysay. Waxay la barbar dhigtaa buugaagta kale ama khaanadaha kale. Dhamaan sheyga buugta ayaa u isticmaalay birta birta ah sidii wax aasaasi ah oo lagu lifaaqay qalab tayo sare leh. Iyada oo leh 5 heer oo shelf ah, waxay siisaa boos weyn buugaagta taas oo ka dhigaysa mid waxtar u leh noloshaada.
Golaha Wasiiradda Lix-Lakab
Iyada oo maqaar koore ah oo leh walnut veneer laga soo dhoofiyo, MEDO kabadh lix lakab ah ayaa ah naqshad caadi ah oo ku wanaagsan qolka cuntada, qolka fadhiga iyo qolka jiifka, taas oo ah bilic iyo waxqabad. Cabbirka ku habboon, qaabka fasalka sare oo kooban, iyo sidoo kale howlaha keydinta badan ayaa ka dhigaya mid aan looga maarmin gurigaaga.
Miis maqaar Saddal Tayada Sare
Naqshadayntu waa mid fudud oo jilicsan taas oo ku habboon qaabab iyo meelo badan. Waxay si aad u wanaagsan u soo bandhigaysaa muuqaal yar. Saldhiggu wuxuu ku yimaadaa tuubbo bir ah oo laba jibbaaran. In kasta oo ay u egtahay mid caato ah, way ku adag tahay tayada birta wanaagsan.
Maqaarka Alwaaxda Iskudhafan Miiska Akhriska
Maqaar koore ah oo jilicsan, dusha sare ee qiiqa qiiqa ah, qaab bir ah oo tayo sare leh, naxaas caday leh fikradda naqshadeynta ugu yar. Waxay ku dhajisan tahay 2 khaanad iyo qaab gacmeed kooban, casri ah, xarrago leh oo wax ku ool ah, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon qaababka kala duwan ee naqshadeynta gudaha.
Alaabta Casriga ee Birta ahama ee Birta ah
Ahama Birta Buugga 1900 * 430 * 2000mm
Waxyaabaha: maqaar koorsada caymiska tit titanium steel ahama
Qaabka hoose Lugaha Birta ah
Alaab Casri ah Lix Dabaq Golaha Wasiirada
Lix Gogol Wasiiro 600 * 400 * 1200mm
Waxyaabaha: Premium PVC ， dhoofinta walnunt
Qaabka hoose Lugta Lugta + Leather Saddle
Qalabka Kombuyuutarka Casriga ah
Miiska Kombiyuutarka 1500 * 600 * 750mm
Waxyaabaha: Dhamaadka maqaarka oranjiga ah, miiska dushiisa qiiqayo, qalabka saldhigga qalabka, naxaas caday
Qalab Casri ah oo Habeen ah
Miiska 595 * 410 * 590mm
Waxyaabaha: Muraayadda MDF ee sigaar cabbin + birta birta ah ee birta ah ee birta ah + khaanadda wax lagu keydiyo
Miis Casri ah oo Farshaxan ah
Miiska 1200 * 600 * 750mm
Waxyaabaha: Mashiinka birta ah ee ， qaaliga ah ee dhoofinta ne walnunt veneer laga soo dhoofiyo
Golaha Khamriga Casriga ah
Golaha Khamriga 1200 * 400 * 1360mm
Saxarada Wareegtada ah ee Furniture
Saxaro Wareeg ah 60mm
Waxyaabaha: Isbuunyo & isbuunyo adkeysi sare leh
Jadwalka Qaxwaha Alaabta Casriga ah
Miiska qaxwada Ø800 * 300mm Ø500 * 490mm
Waxyaabaha: Maqaar koorsada Premium
Qaabka hoose Qoryaha kabaha sadarka ah ee lugta
Hore: Golaha wasiirada